बाँकेमा सलहको नयाँ झुन्ड- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कोरोना संक्रमितले बच्चा जन्माइन्, आमा र बच्चा दुवैको अवस्था सामान्य
असार ६, २०७७ मधु शाही
बाँके — नेपालगन्ज मेडिकल शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा कोरोना संक्रमित महिलाले शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माएकी छन् । कृष्णनगर कविलवस्तुकी २७ वर्षिया महिलाले शनिबार बिहान ५ बजेर २५ मिनेटमा २ किलो ४ सय ग्राम तौल भएकी छोरी जन्माएकी हुन् ।
अहिले आमा र छोरीको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालका उप निर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठले बताए ।
भारतको मुम्बईदेखि एक महिना आएकी ती महिला २२ दिनदेखि बुटवलको क्‍वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् । ८ दिनअघि कोरोना जाँच गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो । पेट दुखेर अस्पतालमा भर्ना भएकी उनी संक्रमित भएकै कारण डेलीभरी गर्न असहज मानेपछि भैरवहाको अस्पतालले नेपालगन्ज मेडिकल अस्पतालमा रिफर गरिएको डा. दिनेशले सुनाए । ‘संक्रमित भएकै कारण डेलीभरी गराउन डराउछन्,’ उनले भने,‘यो केश उतैको अस्पतालले सल्भ गर्न सक्थ्यो ।’
सरकारले थर्ड लेबलको अस्पतालमा उपचार गराउने मापदण्ड अनुसार उनी त्यहाँ आएकी हुन् । बहु सुविधायुक्त अस्पताल नेपालमा धरानको बीपी कोइराला मेमोरीयल, काठमाडौंको टिचिङ र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल शिक्षण अस्पताल हो ।
राति १ बजे एम्बुलेन्समा आएकी संक्रमित महिला लेबल थ्रीमा आउने पर्ने अवस्था नभएको डा. श्रेष्ठले बताए । उनी संक्रमित भएकै कारण ६ घन्टाको बाटोमा रिक्स लिएर अस्पताल आएकी थिइन् ।
पहिलो बच्चा अप्रेसन गरेर जन्माएको हुँदा दोस्रो पनि अप्रेसन गर्नु परेको उनले बताए । यसअघि नेपालगन्ज मेडिकल अस्पतालमा अछामदेखि आएकी १८ हप्ते गर्भवतिको ठूलो आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनको स्थिति पनि सामान्य बन्दैछ ।
प्रकाशित : असार ६, २०७७ १५:०२